Horumarinta cayaaraha jilitaanka ee u gaarka ah moobiilka mobilada, LOCOS waxay siisay ciyaartoy cusub ciyaar bilaash ah. Adduun xamuul xamuul ah ayaa nagu sugaya Simulator Mobile Truck Simulator, oo ka mid ah cayaaraha jilitaanka mobilada. Ciyaarta aan fursad u heli doonno inaan isticmaalno moodooyinka xamuulka ee kala duwan, waxaa...
Iyada oo leh Simulator Excavator Crane Simulator, oo ka mid ah cayaaraha jilitaanka mobilada, waxaan isku dayi doonaa inaan furno waddooyinka barafka daboolay oo dabooli doono baahiyaha dadka. Qaboojiyaha Barafka ee Cano Simulator, kaas oo loo soo bandhigo ciyaartoyga leh mawduuca barafka, waxaa soo saaray oo daabacay Warrior Eagle....
Diyaar u noqo inaad ku ciyaarto ciyaar xamuul dhab ah Maareeyaha Gawaarida Gawaarida, kaas oo ka mid ah cayaaraha jilitaanka ee madal mobilada! Soo -saarka, oo ay ku jiraan moodooyinka xamuulka ee kala duwan, waxaan u qaadi doonnaa xamuulka adduunka oo dhan oo ay la socdaan waxyaabo midab leh. Waxaan isku dayi doonaa inaan macaash badan...
FarmVille 2 waa ciyaar jilitaan ku dhisan beer oo aad bilaash ugu ciyaari karto kiniinigaaga Windows 8 iyo kombiyuutarka. Ciyaarta, halkaas oo aad ku dhisi karto beertaada oo aad kula kori karto saaxiibbadaada sidaad rabto, ayaa sidoo kale leh taageero luqadda Turkiga oo aan loo baahnayn xiriir internet. FarmVille 2: Baxsashada Tuulada,...
Darawalka Degdegga ah ee Sim wuxuu ka mid yahay cayaaraha jilitaanka ee aad ka soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto kombiyuutarkaaga iyo kiniinigaaga Windows-ku-saleysan. Ciyaarta, halkaas oo aad ku adeegsan karto dhammaan baabuurta gurmadka, waxay ka dhacdaa magaalo aad u yar waxaadna isku daydaa inaad badbaadiso dadka...
Ciyaaraha Sinma, oo ka mid ah horumariyeyaasha ciyaarta guuleysta ee madal guur -guura, ayaa isku diyaarinaya inay dadka mar kale ku dhoolacadeeyaan ciyaar cusub. Dunida beeraleydu waxay sugi doontaa ciyaartoy leh Simulator Beeraha Xoolaha, oo ka mid ah cayaaraha jilitaanka ee madal guur -guura. Ciyaarta aan ku qaban doonno shaqooyinka...
Haddii aad ka daashay isteerinka mashiinka xamuulka qaada ee Ameerika oo aad rabto inaad xoogaa hodan noqoto, faylkaan keydinta ah ayaa waxtar kuu yeelan doona. Waxaa jira laba faylal kayd oo kala duwan oo ku jira faylka. Waxaa jira laba fayl oo kala gooni ah oo leh eber DLC iyo dhammaan DLC -yaasha oo firfircoon. Waa inaad ku dhejisaa...
Waxaad ku baran kartaa sida looga soo dejisto demo ciyaarta maqaalkan: Sida Loo Soo Degsado Demo Simulator American Truck Simulator? Waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay jilitaan baabuur xamuul ah oo ay soo saartay Software -ka SCS, kaas oo ka dambeeya taxanaha ciyaarta jilitaanka sida American Truck Simulator, Euro Truck Simulator iyo...
Europe Truck Simulator waa ciyaar jilitaan ah oo ay soo saartay Serkis oo loogu talagalay ciyaartoy madal mobilada ah. Soosaarka, oo u muuqda ciyaar xamuul, ciyaartoydu waxay qaadi doonaan culeysyo u dhexeeya magaalooyinka leh moodooyinka xamuulka gaarka ah waxayna isku dayi doonaan inay fuliyaan howlgallada. Ciyaarta oo leh dhex...
Simulator Spaceflight, halkaas oo aad ugu safri karto daraasiin meerayaal kala duwan oo leh gantaalaha aad naqshadayso oo aad sahaminta u gasho si aad u hesho meelo la degi karo, waa ciyaar u gaar ah qaybta cayaaraha jilitaanka ee madal guur -guura. Ujeeddada ciyaartan, oo siisa waayo -aragnimo aan caadi ahayn kuwa jecel cayaarta oo leh...
3D Simulator Bus School waa ciyaarta wadista baska iskuulka ugu hooseeya oo leh muuqaalo tayo wanaagsan leh oo aad bilaash ugu ciyaari karto kiniinigaaga Windows iyo kombiyuutarkaaga. Ciyaarta aad kula kulmi doontid dhibka wadista bas ay ka buuxaan arday, waxaad dooran kartaa 5 bas oo kala duwan. Ciyaarta jilitaanka wadista ee nagu soo...
Gawaarida xamuulka ah ee 3D waa ciyaar jilitaan ah oo aan ku isticmaalno gaadiid kala duwan, waana soosaarid muujineysa tayadiisa oo leh saxiixa Troopers Game. Waxaan isku dayaynaa inaan dhammeystirno in ka badan 40 hawlgallo adag oo ciyaarta ah halkaas oo aan ku wadno 8 gaari oo ay ku jiraan baabuur, diyaarado, baabuurta dab damiska iyo...
Simulator City Traffic Light Simulator waa ciyaar jilitaan oo ku siineysa caqabadda maareynta taraafikada magaalada mashquulka badan. Ciyaarta, oo aad isku dayeyso inaad ku ilaaliso socodka taraafikada inta ugu badan ee suurtogalka ah ee dhulka hoostiisa ah iyo kan xad -dhaafka ahba, wuxuu maareeyaa madadaalo in kasta oo uu aad uga...
Simulator kalluumeysiga ugu dambeeya waa ciyaar jilitaan kalluumeysi oo leh ciyaarta ugu macquulsan iyo sawirrada aad ku ciyaari karto mobilada. Warsaw, Paris, Hamburg, New York, Ottawa, marka la soo koobo, mishiinka kalluumeysiga oo aad u macquul ah halkaas oo aad ka soo qabato kalluunka adduunka oo dhan. Waxaa intaa dheer, waa bilaash...
Baabuurka Simulator 2 waa jilid wadista baabuurka, mishiinka wadista oo ka soo baxay si gaar ah mashiinka Android. Ciyaarta jilitaanka wadista, oo bixisa sawirro tayo leh oo aad ka arki karto gudaha gaariga 360 darajo oo aad beddeli karto dhammaan qeybaha gaarigaaga, waxaad isku daydaa inaad dhammaystirto ergooyinka oo aad ka qeybgasho...
Waxaa laga saaray daabacaadda sababtoo ah waxay u aragtay Google waxyeello. Qaboojiyaha Barafka culus ee Barafka, kaas oo ka mid ah ciyaaraha jilitaanka ee madal guur -guura, wuxuu na siinayaa fursad aan ku ciyaarno ciyaarta badbaadinta barafka ee bilaashka ah. Waxaa soo saaray Larrea Apps, waxaa ku jira dhismayaasha guurguura gaadiid...
Dungeon Simulator wuxuu u taagan yahay ciyaar madadaalo iyo madadaalo leh oo madadaalo leh oo aad ku ciyaari karto aaladahaaga mobilada leh nidaamka hawlgalka Android. Dungeon Simulator, ciyaar weyn oo guur -guura oo aad ku dhex geli karto halgan istiraatiiji ah, waa ciyaar aad kula dagaallanto cadowga baan. Waxaad ku yeelan kartaa...
RFS - Simulator Duulimaad Dhab ah, halkaas oo aad ugu duuli karto meelo kala duwan oo adduunka ah oo aad qaban karto hawlgallo kala duwan, waa ciyaar aan caadi ahayn oo ka mid ah cayaaraha jilitaanka ee madal guur -guura. Ujeeddada ciyaartan, oo siisa khibrad u gaar ah dadka jecel cayaaraha oo leh sawirro cajiib ah iyo muuqaallo...
Real Cruise Ship Driving Simulator 2019, halkaas oo aad ku aadi karto safarka badda ee xiisaha badan adoo adeegsanaya maraakiib kala duwan, waa ciyaar gaar ah oo ay doorbidaan in ka badan boqol kun oo qof oo jecel ciyaarta. Iyada oo leh sawirradiisa dhabta ah iyo saamaynta dhawaaqa tayada leh, waxa aad u baahan tahay inaad ku samayso...
Kaxayso in ka badan 15 baabuur, xamili wiishash iyo mashiinno waaweyn, fuliya ujeeddooyin sahlan oo kakan, sahamina deegaan ballaadhan oo faahfaahsan oo adduunka ah. Farqiga ugu weyn ee Drive Simulator -ka ayaa ah inuu siinayo adeegsadaha fursad uu ku kaxeeyo dhammaan noocyada baabuurta. Hal hawlgal ayaad diyaaradda ku jiidi doontaa...
In Simulator Construction 3 Lite Edition waxaad ku ciyaari kartaa horudhac kooban oo ku saabsan qaybinta cusub ee taxanaha Simulator Construction. Ka tag mashiinnada mashiinnada ruqsadda asalka ah leh oo la kulan magaalada quruxda badan ee Neustein. Simulator -ka Dhismaha 3 wuxuu ku noqonayaa Yurub: ku sahami magaalada Yurub...
Qoraa Simulator 2, halkaas oo aad ku dhibtoon doonto inaad noqoto qoraa caan ah adiga oo qorshaynaya xirfad ka bilaabanta qoraaga isla markaana furta jahooyinka kumanaan qof adiga oo qoraya buugaag aan tiro lahayn, waa soosaar u gaar ah oo aad ku ciyaari karto madal guur -guura iyada oo aan wax dhibaato ah dhammaan aaladaha leh nidaamka...
Simulator-ka Nukliyeerka Submarine inc, kaas oo loo soo bandhigo dadka jecel ciyaarta laba goobood oo kala duwan oo leh labada nooc ee Android iyo IOS iyo rafcaanka ciyaartoy aad u tiro badan, waa ciyaar dhex-dhexaad ah halkaas oo aad ku naqshadayn doonto markabkaaga badda hoosteeda oo aad qaadi doonto hawlgallo aad u buuran iyo horumari...
Cargo Simulator 2021 waa ciyaar jilid baabuur wadista oo leh khariidad cabbirkeedu yahay Turkiga (dhammaan magaalooyinka). Cargo Simulator 2021 Turkey, oo la taagan qaabkeeda multiplayer-waqtiga dhabta ah halkaas oo aad ku ciyaari karto oo aad kula macaamili karto asxaabtaada isla khariidadda, ayaa si bilaash ah loogu soo dejisan karaa...
SimAirport waa ciyaar jilitaan oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay naqshadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan garoomadooda. SimAirport, oo ah mishiinka madaarka oo kaa doonaya inaad adeegsato xirfadahaaga istiraatiijiyadeed, wax walba waxaan ka bilownaa meel xoqan, waxaan ka dhisnaa gegida dayuuradaha dhulka hoostiisa, ka dibna waxaan qoreynaa...
Battle of Warplanes waa ciyaar dagaal diyaaradeed oo leh sawirro tayo leh iyo ciyaar-ciyaar aad si bilaash ah ugu ciyaari karto kumbuyuutarkaaga Windows-ka ama kiniiniga hoose. Ciyaarta, oo bixisa fursad ay kaga ciyaarto ciyaartoy dhab ah, ayaa sidoo kale leh ikhtiyaar qaab hal ciyaartoy ah oo aad kaga qeyb qaadan karto dagaalada gaarka...
Google Earth VR waa jilitaan kuu oggolaanaya inaad adduunka ka sahamiso gebi ahaanba cusub oo leh xaqiiqda dalwaddii. Iyada oo la adeegsanayo Google Earth VR, oo aad ku adeegsan karto muraayadaha dhabta ah ee HTC Vive, waxaad ku wareegi kartaa waddooyinka Tokyo, ku duuli kartaa Grand Canyon ama ku wareegi kartaa Tower Eiffel sidaad...
Kalluumeysiga Trophy 2 waa ciyaar jilitaan ah oo aad ku raaxeysan karto ciyaarta haddii aad rabto inaad hesho khibrad kalluumeysi oo macquul ah. Trophy Fishing 2, ciyaar kalluumeysi oo aad ku soo dejisan karto kuna ciyaari karto kombiyuutarradaada lacag laaan, ujeeddadiisu waa inay ku siiso waayo -aragnimo ciyaar oo faahfaahsan labadaba...
Microsoft iyo Roxio ayaa isu yimid waxayna u diyaariyeen xirmo mawduuc cajiib ah kuwa jecel Angry Birds. Waxaad ku kicin kartaa miiskaaga xirmada mawduucan, oo ay ku jiraan shimbiraha xanaaqsan iyo sidoo kale doofaarrada xumaanta leh. Iyada oo xirmadan mawduucan ay diyaarisay shirkadda Roxio, oo ah abuuraha Angry Birds oo lagu soo...
Ciyaaryahanka Kubadda Caraysan waa ciyaar kubbadda cagta guur -guura oo leh qaab aad uga duwan ciyaaraha kubbadda cagta ee caadiga ah oo waliba noqon kara madadaalo. Waxaan marti u nahay sheekada geesiga madaxa kulul ee Kubadda Cagta, ciyaar aad ka soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo...
Angry Bull 2016 waa ciyaar jilitaan mobiil oo noqon karta ikhtiyaar wanaagsan oo lagu dilo waqtiga. In Angry Bull 2016, jilitaan dibi oo aad ka soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada adiga oo adeegsanaya nidaamka hawlgalka Android, waxaan ka qaybgalnaa xafladda dibida oo si joogto...
Nooc kale oo xiiso leh oo ka mid ah ciyaarta Angry Birds ee dunida caanka ka ah. Ciyaarta, oo ka dhacda xafladaha adduunka oo idil, shimbirahayagu waxay mar kale daba socdaan doofaarrada. In kabadan 260 qaybood ayaa kugu sugaya Xilliyada Shimbiraha Cadhaysan. Qaybo cusub ayaa lagu daray ciyaarta oo leh casriyeyn bilaash ah. Waa inaad si...
Shimbiraha xanaaqsan 2 ayaa booskiisa ka dhex qaatay cayaaraha halxiraalaha leh shaashadaha, iyadoo taxanaha caanka ah ee Angry Birds uu ugu dambayn ku soo noqday nuxurkiisii. Angry Birds 2, oo adeegsadayaasha casriga ah ee Android iyo kuwa kiniiniga ah ay bilaash ugu ciyaari karaan aaladooda mobilada, waxay maamushaa inay mar kale noo...
Age Of Empires 2, oo u suurtagashay inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna cayaaraha istaraatiijiyadeed halkaas oo aad ka geli karto dagaallo marka dunidu sugayso in lala wadaago Rome burburtay, ayaa la horumariyey oo laga sii qurxiyey qaabkeeda cusub. Ciyaarta, oo ku guuleysatay inay ku guuleysato abaalmarino badan waqtigeeda,...
Shooter Bubble Shooter waa ciyaar caadi ah oo soo boodaya oo aad ku ciyaari karto kombiyuutarkaaga. Ciyaarta, oo leh 4 qaab ciyaareed oo kala duwan: istiraatiijiyad, arcade, toogte iyo marathon, ayaa kaa caawin doonta inaad waqtigaaga firaaqada ah ku qaadato sida ugu xiisaha badan. Ujeeddada aan ka leenahay ciyaarta waa in aan uruurinno...
Zombies la yaab leh oo qosol leh oo isku dayaya inay la wareegaan adduunka ayaa isku dayaya inay marka hore la wareegaan beertaada. Waxaad isku deyeysaa inaad cadowgaaga ka fogeyso guriga adoo adeegsanaya dhirta, kuwaas oo ah hubka kaliya ee ka dhanka ah zombies -ka. Dhirta iyo ciyaar kale oo madadaalo leh oo uu abuuray PopCap. Zombies...
Minion Masters waa isku-darka deg-degga ah ee dhisidda sagxadda iyo difaaca munaaradda. Ciyaar 1v1 ama u kaxee saaxiibkaaga 2v2 oo ka qaybgal dagaalo hal abuur leh oo ay ka buuxaan xeelado hal abuur leh iyo ciyaar xariif ah. Ururi in ka badan 200 oo kaar oo leh makaanik u gaar ah. Ciyaarta istiraatiijiyadda kaarka-bilaashka ah ee...
Thanks to FastStone Photo Resizer, waxaad u beddeli kartaa qaababka sawirradaada si aad u badan, sidoo kale waxaad ku dhejin kartaa astaanta sawirradaada si aad u badan. Ku darista saamaynta iyo qoraalka, xajmiga, beddelidda qaraarka, iwm ee sawirka iyo faylasha sawirka ee kaydkaaga. Qalabkan bilaashka ah, oo kuu oggolaanaya inaad si...
Xusuusin: Xiriirka soo dejintu waa la tirtiray sababta oo ah faylka rakibidda barnaamijka waxaa Google u aqoonsaday inuu yahay furin. Barnaamijyada beddelka ah, waxaad booqan kartaa qaybta software -ka garaafyada. Cartoon Generator waa barnaamij tafatir sawir oo si sahlan loo isticmaali karo oo kuu oggolaanaya inaad ku darto saamaynta...
Studio Watermark Studio waa mid ka mid ah barnaamijyada bilaashka ah oo si sahlan loo isticmaali karo oo loogu talagalay in si fudud loo daabaco summadaada, taas oo ah, sumaddaada, sawirka iyo faylka sawir ee aad haysato. Studio Watermark Studio, oo ka mid ah barnaamijyada ay tahay inaad isticmaasho haddii aad ka cabanayso in sawirrada...
Barnaamijka Qabashada Qarsoon waa barnaamij lacag laaan ah oo loo diyaariyey kuwa doonaya inay shaashadaha kombiyuutarkooda ka qaataan sida ugu gaaban uguna dhaqsaha badan. Barnaamijka, oo qaadan kara shaashadda shaashaddaada oo dhan ama daaqadda firfircoon, ayaa sidoo kale u oggolaanaysa in si toos ah loo qaado shaashadaha. Qarsoon...
Codsiga Lab Lab waa codsi tafatir sawir ah oo aad ugu adeegsan karto aaladahaaga nidaamka hawlgalka Android. Shaybaarka Sawirka wuxuu ka kooban yahay in ka badan 800 oo saameyn weyn u leh sawirradaada. Saameyntan waxaa ka mid ah:* sawir-gacmeedyada dhabta ah* shaandhooyinka sawir-qaadeedka* xirmooyin qurux badan* sawir-gacmeedyo...
Dib -u -habeynta Sawirka Fudud waa barnaamij dib -u -habeyn muuqaal oo bilaash ah oo ka caawiya dadka isticmaala inay ballaariyaan ama yareeyaan sawirrada. Nolosheena maalinlaha ah, waxaan u adeegsan karnaa faylasha sawirka aan ku kaydinno kombiyuutarkeena ujeedooyin kala duwan. Mararka qaarkood waxaan u baahannahay inaan cabbirno,...
Total Watermark waa barnaamij biyo -calaamadeyn ah oo loogu talagalay in looga hortago in sawirrada gaarka ah ee aad internetka ku wadaagto la koobiyeeyo oo meel kale lagu wadaago magacyo kala duwan. Barnaamijka, waxaa suurtogal ah in la abuuro calaamado biyood oo kala duwan oo leh qoraal iyo astaan. Adiga ayaa goaaminaya midabka,...
Saamaynta Banner waa softiweer xirfadle ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha inay ku abuuraan calammo xayaysiis qaab Flash ah. Barnaamijka, oo aadan u baahnaan doonin wax aqoon ah si aad u isticmaasho, waxaa si sahlan u isticmaali kara isticmaaleyaasha kombiyuutarka ee heerarka kala duwan oo dhan iyada oo ay ugu mahadcelinayaan...
Barnaamijyada PhotoPad waa barnaamij tafatir sawir ah oo aad ku tafatiri karto sawirradaada oo aad saamayn ku yeelan karto iyaga oo ku ciyaaraya. Waxay leedahay dhammaan astaamaha barnaamijyada tafatirka sawirrada caadiga ah ay samayn karaan. Waxaa intaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad barnaamijka u isticmaasho lacag laaan mana yeelan...